🚜 Dukaamada Beeraha | Booqo Hultsfred
Ka adeego deegaanka jawi miyi - cagaar, waara oo gudaha ku koray.
Takhasusyada deegaanka laga beero sida farmaajada, khudaarta, macaanka iyo strawberries ayaa lagu iibiyaa dukaamada beeraha iyo dukaamada raashinka ee degmada oo dhan. Halkan waxaa ah liis la doortay oo dukaamada beeraha ah oo ay tahay inaadan seegin.
Kaliya alaabada tayada ugu sareysa ayaa halkan laga heli karaa. Hilibka waxaa laga soo saaray gudaha oo si fiican ayaa loo daryeelay. Dukaanka waxaad ku arki doontaa waxyaabaha ugu badan hilib ahaan. Feeraha iyo waxyaalaha laysku daro, hilibka duqadda
"Cunto wanaagsan oo damiir nadiif ah leh, oo toos uga socota beeraha". Halkan waxaad ka dalban kartaa hilib dabiici ah iyo mid gudaha laga soo saaray. Booqo ama fasax kuna noolow beer dabiici ah, la kulan
Axelssons iyo Aby
Dukaanka beeraha waa goob dalxiis oo xiiso leh oo loogu talagalay kuwa doonaya inay iibsadaan alaabada tayada ugu sareysa leh. Inta lagu jiro xilliga 'strawberry', waad aadi kartaa oo soo qaadan kartaa mirahaaga strawberries. IN